Game Editor sy GameDevelop na Alternatives an'ny Game Maker amin'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Game Editor sy GameDevelop na Alternatives an'ny Game Maker amin'ny Linux
Pavloco | | GNU / Linux, Games, About us, fandaharana
Lalao indie tena tsara antsoina Damn Castilla. Izy io dia lalao Freeware noforonin'i Locomalito mpamorona Espaniola ny lalao video Retro. Mazava ho azy, amin'ny maha retrogamer tsara ahy dia nanapa-kevitra ny hametraka ny tanako amin'ilay lalao voalaza etsy ambony aho. Mazava ny paikadiko, alao ny lalao ary apetraho amin'ny fampiharana ny serivisy WINE. Na izany aza, ny lalan'ny fiainana dia noforonina tamin'ny habibiana fatratra ary na dia nanao ny zavatra aza i WINE, miadana loatra (tsy azo lalaovina) ny lalao.
Ity lalao mahafinaritra ity, toy ny freeware lehibe maro hafa, dia novolavolaina Game Maker. Mampalahelo fa tsy manohana i Game Maker GNU / Linux ary ny ratsy indrindra, tsy manome akory ny fahafahany manondrana lalao noforonina mba lalaovina amin'ny Linux.
Noho izany dia nanomboka nitady safidy vitsivitsy aho Open Source ho an'ny famoronana lalao video, fomban'ny Game Maker.
Game Editor dia, araka ny mpamorona azy, ny Open Source Video Game Design fitaovana izay manome anao hery hamorona ny lalao nofinofisinao ary tsy mitovy amin'ny fitaovana hafa (vakio Game Maker) no ahafahanao manova ny kaody Source ary ny mety hanondranana , na ho an'ny solosaina na ho an'ny finday.
Marina izany, ny Game Editor dia mamela anao hamorona lalao ho an'ny Linux, Mac, Windows (95, 98, Me, NT, 2000, 2003, XP, Vista, 7), Mac OS X, iPhone, iPad, Pocket PC, PC tanana. GP2X, sns.
Misy kinova voaloa, raha ny hizara ny lalao ho tombom-barotra no tanjonao. Fa ny tena marina dia tsy azoko ny fomba fitantanana azy. Nahazo alalana amin'ny alàlan'ny GPL V.3 ny rindrambaiko.
Efa nanandrana an'ity fitaovana ity aho ary na dia manohana ny GNU / Linux aza ny zava-misy dia tena mahantra izy io. Izany dia hatramin'ny fananana olana lehibe miaraka amina feo ary atoro ny fampiasana WINE hitarika lalao. (-.-)
Ny mpanoratra dia mamaritra azy ho fitaovana ho an'ny Fampivoarana ny lalao video maimaim-poana (na dia afaka ihany koa izy io satria navotsotra ambanin'ny Fahazoan-dàlana Zlib / PNG), izay ahafahanao mamorona karazana lalao video amin'ny 2d. Tsy ilaina ny fahalalana fandaharana satria ny fampandrosoana rehetra dia atao amin'ny alàlan'ny IDE amin'ny endrika sary.
Ny rafitra famoronana lalao dia mitovy amin'ny Game Maker, manana a HERE amin'ny alalany no hanatanterahana ny fomba rehetra amin'ny famoronana lalao video. Manana Rafitry ny fisehoan-javatra sy hetsika kely tena mahavariana izay ahafahanao milalao lalao nefa tsy (araka ny filazan'ny mpanoratra azy) mamorona tsipika kaody tokana, na izany aza dia manana zavatra mitovy amin'ny rafitry ny script izy io.
Izy io koa dia manana rafitry ny Jiro mavitrika, fizika, motera partika, ankoatry ny fiasa maro hafa. Na izany aza, ny toetra mamaritra azy tsara indrindra dia ny fahafahany manangona ny lalao amin'ny kaody masinina. Io ihany no karazany iray (farafaharatsiny fantatro) izay mamokatra ny lalao ho adika mivantana, tsy mila mpandika teny antonony, ity fepetra ity (heverina fa) manome azy fahombiazana ambony noho ny mpifaninana aminy.
Su tombon-dahiny dia ny hoe tsy dia sarotra loatra ny mampiasa azy amin'ny efijery kely (toa ny 🙁). Ary vao tsy ela akory izay dia tamin'ny fiteniny tany am-boalohany, frantsay, ka ny fisehony (amin'ny anglisy) dia kely fotsiny ny fotoana ary voafetra ihany ny antontan-taratasy. Ankoatr'izay dia manohana amin'ny fomba ofisialy an'i Ubuntu ihany izy, na dia azo atao aza ny mampiasa azy amin'ny distro hafa.
Mpitsikera iray Ho an'ny Game Editor sy GameDevelop dia ny fahaizan'ny mpamorona manome anarana ny tetikasan'izy ireo no mahatsiravina (mahatsiravina, mahatsiravina, mahatsiravina). Faharatsiana mijaly mafy amin'ireo mpamorona Open Source izany. Ny fikarohana ny mombamomba ny tetikasa dia lasa nofy ratsy hananana anarana mahazatra toy izany. Saingy ity no horesahintsika amin'ny andro hafa.
Toa ao amin'ny vanim-potoana volamena amin'ny lalao dokambarotra ao amin'ny GNU / Linux, fa izaho manokana dia nankafy lalao indie foana noho ny kalitaony sy ny noforoniny. Tsy mpamorona videogame aho fa amin'ity lahatsoratra fohy ity dia manantena aho fa hanolotra fitaovana vitsivitsy hitako fa mahafinaritra amin'ny famolavolana lalao, izay maimaim-poana ary mamela ny mpanoratra azy ireo hamorona lalao koa hanondrana azy ireo any amin'ny rafitra fiasa ankafizinay indrindra. Ataovy izany rehetra izany nefa tsy very denaria ary ataovy amin'ny sehatra tsara indrindra, avy amin'ny Linux.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Game Editor sy GameDevelop na Alternatives an'ny Game Maker amin'ny Linux
gab1to dia hoy izy:
Ny ratsy indrindra amin'izany dia misy ny sasany milaza fa mahavita manahaka an'i Maldita Castilla izy ireo nefa tsy misy olana amin'ny Linux. Raha manao fikarohana ao amin'ny Google ianao dia hahatsapa izay lazaiko.
Tena tsy haiko na hino azy ireo aho. Miadana loatra ho ahy ilay izy.
Mamaly an'i gab1to
Indrindra fa mandeha tsara ho ahy izy io, saingy eny, vao nividy gpu vaovao (geforce430) aho, ka izany no antony tsy maintsy
Misaotra nahita ireo fitaovana ireo, tiako ny Retro ary betsaka kokoa raha toa ka avy amin'ny Linux izany. Mila fotoana sy faharetana fotsiny aho hamoronana zavatra.
Lahatsoratra tsara, tsy fantatro ny momba ireo programa ireo raha mijery ny pejin'ny tsirairay hitako hoe mahay izy ireo angamba hanao ny lalao ho fitsapana ahy!
Manantena aho fa misy mpamorona maro kokoa hanomboka hampiasa fitaovana mifanaraka amin'ny linux, satria efa nahita lalao mahaleo tena tena maro aho, saingy satria namboarina tamin'ny Game Maker izy ireo dia tsy azo lalaovina amin'ny linux na dia misy divay aza ary tsy mikasa ny hitondra azy ireo ny mpamorona azy. Lahatsoratra tena tsara.
Misaotra, tena tiako ny lalao ary raha manana ny hazakaza-kanto aho dia azo antoka fa hanao ny lalao ho an'ny Linux aho, saingy tsy izany no fisainan'ny ankamaroan'ny mpamorona.
Baron ashler dia hoy izy:
Eny eny, fitaovana mahaliana roa izy ireo hiasa amin'ny famoronana lalao video. Hanandrana aho, manao ahoana ianao? Misaotra amin'ny lahatsoratra.
Valiny tamin'i Baron Ashler
Gustavo Martinez dia hoy izy:
Tiako ilay lahatsoratra, nahasarika ny saiko ny GameDevelop
Valiny tamin'i Gustavo Martínez
Rotietip dia hoy izy:
Fomba iray hafa ananana ny lalao Maldita Castilla sy ny lalao hafa miaraka amin'ny Game Maker (indrindra ireo izay tsy mahatsapa ny mpampita azy any amin'ny rafi-piasana hafa) izay mihazakazaka eo ambanin'ny Linux dia ny mamaky ( http://yoshifangames.foroactivo.com/t2897-programa-para-decompilar-game-maker-exe ) hijerena ny fomba anaovana azy ary hamerina izany amin'ny fomba hafa efa voalaza.
Mamaly an'i Rotietip
SWOOOORDS! Lalao style style roguelike
Maimaimpoana ho an'ny iPhone izao ny WhatsApp